We Fight We Win. -- " More than Media ": ရခုိုင်ပြည်နယ် ရခုိုင်လူမျိုး တွေ လက်ထဲမှာရှိရမယ်။
ရခုိုင်ပြည်နယ် ရခုိုင်လူမျိုး တွေ လက်ထဲမှာရှိရမယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရခုိုင်လူမျိုးတွေသာအုပ်ချုပ်ခွင့်လျှင် ဘာသာရေး
ရခုိုင်ပြည်နယ်က ထွက်တဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေတွေကို ရခုိုင်လူမျိုူးတွေသာအများဆုံးခံစားခွင့်ရ
ရှိသင့်တယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ သိပ်သနားဖို့ ကောင်းတယ်။
အဓိကပြသနာ က ဗမာစစ်အုပ်စုရဲ့ ပြသနာသာဖြစ်တယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဇိုးရည်နေမျှ လူမှုအနိဌာရံပေါင်းစုံကို
ရခုိုင်ပြည်နယ်ရရှိဖုို့ အတွက် ငြိ်မ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေကို
လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ထောက်ခံမယ်။ ရခုိုင်ပြည်နယ်ရရှိဖု့ိအတွက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆင်နွဲမယ်ဆို
your group is terrorist
Why not Chin, Kachin, Shan, Karen and Mon? All states should be splited apart and gave independence so that civil war will end soon.
မိုးသီး ဦးနှောက်အခန်းတွေ ပျက်နေပါတယ်။ သာမန်လူတစ်ယောက်လောက်၊ ခလေးလေး တယောက်လောက်ရဲ့ အတွေးအခေါ်တောင် မရှိတော့ပါဘူး။ ၄၈ လမ်း ကိစ္စမှာ အရှက်မရှိ မဟုတ်တယုတ် သတင်းနဲ့ပိုပြီး ဆူပူမှုဖြစ်အောင် လှုံဆော်တာသာ ကြည့်ကြပါ။ နောက်တရက် ၂ရက်နေရင် သတင်းအမှန်တွေ ပေါ်လာမှာတောင် မတွေးမိရှာပါဘူး။
Yakhine should be divided into two parts as well likeS Republic of Yakhine and Republic of Rohingya.
That is really correct, this Bamar government spoiled our land..